BERLIN (Reuters) - Hoffenheim yakarova nekukurumidza kuburikidza naSargis Adamyan naAndrej Kramaric kuti vapedze kukunda 2-1 nekukunda Borussia Dortmund nemusi weChishanu seBundesliga yakananga mukuzorora kwechando.
Yechina-yakaiswa Dortmund iri pamapoinzi makumi matatu nemapoinzi neBayern Munich, iyo inotambira VfL Wolfsburg nemugovera, uye mapoinzi mana kumashure kwevatungamiriri RB Leipzig, avo vanogamuchira Augsburg, uye wechipiri-akaiswa Borussia Moenchengladbach anoshanyira Hertha Berlin.
Mario Goetze akaita rombo rakanaka pakutanga nekuisa vashanyi kumberi mumaminetsi gumi nemana, Hoffenheim achitamburira kupinda mumutambo kunyangwe vakarova bara kubva kuna Robert Skov yemahara kurova nemukana wavo chaiye.
Asi Dortmund, uyo akabaya huni kuburikidza naTorgan Hazard uye akapotsa mamwe mikana yendarama, akatadza kuwedzera imwe chinangwa kunyangwe ari mukutonga kwakazara kwemutambo uye ivo vakarangwa nekuda kwacho.
Mauto akaenderwa paakatsiva Adamyan paakarova bhora kumba mushure mekunge muridzi wechinangwa Roman Buerki atadza kujekesa munomwe makumi manomwe nematanhatu.
MuAmerican, uyo akakwikwidza kakapetana neBayern Munich mukukunda 2-1 kure muna Gumiguru, akabva atendeuka, achiyambuka Kramaric kuzotungamira mukombe maminetsi matatu kubva panguva.
Dortmund, pasina akakuvara Axel Witsel uye kaputeni Marco Reus, zvakare akaenda Thorgan Hazard naMats Hummels panguva yepakati, iyo yekupedzisira ine yaifungidzirwa ruoko rwakakundwa mushure mekudonha kwakashata.
“Isu taive nemutambo zvachose. Hatina kungoshandisa mukana wedu, ”Murairidzi weDortmund, Lucien Favre akaudza vatori venhau. “Taive nemikana mishanu, mitanhatu. Zvaive nyore kuita 2-0 ne3-0. Izvo zvakapusa, zvakapusa.
“Taneta. Kukuvara kaviri panguva yepakati uye isu takatamba zvakanyanya kuomesa. Isu tinogara tichida kuita chakakosha. Izvi zvinotibhadhara chaizvo. ”
Wakanga uri mutambo wechipiri wakateedzana uyo Dortmund akapa humbowo, mushure mekumberi kaviri mumutambo 3-1 kurwisa Leipzig neChipiri.
Ligi inopera mushure memitambo yevhiki ino uye inotangazve panaNdira 17.